Retina AI: Isticmaalka Saadaasha AI si loo wanaajiyo Ololaha Suuqgeynta loona Sameeyo Qiimaha Nolosha Macmiilka (CLV) | Martech Zone
Isniin, November 29, 2021 Isniin, November 29, 2021 Emad Hasan
Deegaanka ayaa si degdeg ah isu beddelaya suuqgeyneyaasha. Cusbooneysiinta cusub ee diiradda saarey sirnimada ee macruufka ee Apple iyo Chrome baabi'inta cookies-ka dhinac saddexaad ee 2023 - oo ay ka mid yihiin isbeddelada kale - suuqleydu waa inay la qabsadaan ciyaartooda si ay ugu habboonaato xeerar cusub. Mid ka mid ah isbeddelada waaweyn waa qiimaha sii kordhaya ee laga helo xogta xisbiga koowaad. Calaamaduhu waa inay hadda ku tiirsanaadaan ka-qaybgalka iyo xogta kooxda koowaad si ay u caawiyaan wadista ololaha.
Waa maxay Qiimaha Nolosha Macmiilka (CLV)?
Qiimaha Nolosha Macmiilka (CLV) waa halbeeg qiyaaseysa inta qiimaha (sida caadiga ah dakhliga ama faa'iidada) macaamiishu u keeni doono ganacsi inta lagu jiro wadarta wakhtiga ay la falgalaan astaantaada - hore, hadda, iyo mustaqbalka.
Isbedeladani waxay ka dhigaan lama huraan istiraatiiji ah ganacsiyada inay fahmaan oo ay saadaaliyaan qiimaha nolosha macaamiisha, taas oo ka caawisa inay aqoonsadaan qaybaha muhiimka ah ee macaamiisha calaamadahooda ka hor inta aan la iibsan oo ay wanaajiyaan xeeladahooda suuqgeyn si ay u tartamaan oo ay u horumaraan.
Dhammaan moodooyinka CLV looma wada sinneen, si kastaba ha ahaatee - badankoodu waxay soo saaraan wadar ahaan halkii ay ka ahaan lahaayeen heerka shakhsi ahaaneed, sidaas darteed, ma awoodaan inay si sax ah u saadaaliyaan CLV mustaqbalka. Iyada oo la raacayo heerka shakhsi ahaaneed ee CLV ee Retina ay soo saarto, macaamiishu waxay awoodaan inay kala soocaan waxa ay tahay ka dhigaya macaamiishooda ugu fiican inay ka duwan yihiin qof kasta oo kale oo ay ku daraan macluumaadkaas si ay sare ugu qaadaan faa'iidada ololaha soo iibsiga macaamiisha xiga. Intaa waxaa dheer, Retina waxay awood u leedahay inay bixiso saadaalin firfircoon oo CLV ah oo ku salaysan is-dhexgalka hore ee macaamilka ee sumadda, taasoo u oggolaanaysa macaamiisha inay ogaadaan macaamiisha ay tahay inay bartilmaameedsadaan dalabyo gaar ah, qiimo dhimis, iyo xayeysiis.
Waa maxay Retina AI?
Retina AI waxay isticmaashaa sirdoonka macmal si ay u saadaaliso qiimaha nolosha macmiilka ka hor wax kala iibsiga ugu horreeya.
Retina AI waa sheyga kaliya ee saadaaliya CLV-ga mustaqbalka fog ee macaamiisha cusub ee awood u siinaya suuq-geeyayaasha kobaca inay sameeyaan olole ama kanaalka go'aamada kobcinta miisaaniyada wakhtiga-dhabta ah. Tusaalaha aaladda 'Retina' ee la isticmaalo waa shaqadayada Madison Reed oo raadinaysay xal waqtiga-dhabta ah si loo cabbiro loona wanaajiyo ololayaasha Facebook. Kooxda halkaas joogtay waxay doorteen inay sameeyaan imtixaan A/B ku salaysan CLV:CAC (kharashka iibsiga macaamiisha) saamiga.
Daraasadda Kiis Madison Reed
Olole tijaabo ah oo lagu sameeyay Facebook, Madison Reed waxa uu ujeedadiisu ahayd in uu gaadho yoolalka soo socda: Cabbir ololaha ROAS iyo CLV wakhtiga dhabta ah, dib u deji miisaaniyadaha ololeyaal faa'iido badan leh oo fahan xayaysiisyada hal-abuurka ah ee keenay CLV: saamiyada CAC ee ugu sarreeya.
Madison Reed waxay dejisay tijaabada A/B iyadoo adeegsanaysa isla bartilmaameedka labada qaybood: dumarka 25 jir ah ama ka weyn ee Maraykanka oo aan weligood noqon macmiil Madison Reed.
Ololaha A wuxuu ahaa ganacsiga sidii caadiga ahayd ololaha.
Ololaha B waxa loo beddelay sidii qaybta tijaabada.
Isticmaalka qiimaha nolosha macmiilka, qaybta tijaabada ayaa si togan loogu hagaajiyay iibsiyada iyo si taban oo liddi ku ah kuwa aan isdiiwaangelin. Labada qayboodba waxay isticmaaleen xayeysiis isku mid ah.
Madison Reed ayaa tijaabisay Facebook-ga iyada oo 50/50 kala qaybsantay muddo 4 toddobaad ah iyada oo aan wax isbeddel olole ah ku jirin. Saamiga CLV:CAC kor u kacay 5% isla markiiba, iyada oo ah natiijada tooska ah ee wanaajinta ololaha iyadoo la adeegsanayo qiimaha nolosha macaamiisha gudaha maareeyaha xayeysiiska Facebook. Iyada oo ay weheliso saamiga CLV: CAC ka wanaagsan, ololaha imtixaanku waxa uu kasbaday aragtiyo badan, iibsi badan oo mareegaha, iyo rukunno badan, ugu dambayntiina horseeday dakhli korodhay. Madison Reed waxay ku badbaadisay kharash aragti kasta iyo kharashkii iibsiba iyadoo sidoo kale heshay macaamiil waqti dheer qiimo badan leh.
Natiijooyinka noocaan ah ayaa caadi ah marka la isticmaalayo retina. Celcelis ahaan, Retina waxay kordhisaa hufnaanta suuqgeynta 30%, waxay kor u qaadaysaa korodhka CLV 44% dhagaystayaal u eg, waxayna kasbataa 8x Soo celinta Kharashka XayeysiiskaROAS) ololaha iibsiga marka la barbardhigo hababka suuq-geynta caadiga ah. Shakhsiyaynta ku salaysan saadaasha qiimaha macaamiisha ee qiyaasta wakhtiga dhabta ah ayaa ugu dambeyntii wax ka beddeleysa tignoolajiyada suuqgeynta. Diirada ay saarayso hab-dhaqanka macmiilka halkii ay ka ahaan lahayd tirakoobka xogta ayaa ka dhigaysa mid gaar ah oo dareen leh oo la isticmaalo xogta si ay ololeha suuq-geynta ugu rogaan guulo wax ku ool ah oo joogto ah.
Retina AI waxay bixisaa awoodaha soo socda
Dhibcaha hogaanka CLV - Retina waxay siisaa ganacsiyada habab ay ku dhaliyaan dhammaan macaamiisha si ay u aqoonsadaan hoggaan tayo leh. Ganacsiyo badan ayaan hubin macaamiishu soo saari doonaan qiimaha ugu sarreeya inta ay nool yihiin. Adigoo isticmaalaya Retina si loo cabbiro celceliska celceliska soo celinta kharashaadka xayaysiinta (ROAS) ee ololaha oo dhan iyo si joogto ah u buunbuuninta hogaaminta iyo cusboonaysiinta CPAs si waafaqsan, saadaasha Retina waxay dhalinaysaa ROAS aad u sarreeya ololaha kaas oo la wanaajiyey iyadoo la isticmaalayo eCLV. Isticmaalkan istaraatiijiga ah ee sirdoonka macmalka ah ayaa siinaya ganacsiyada habab ay ku aqoonsadaan oo ay ku helaan macaamiisha kuwaas oo tilmaamaya qiimaha haraaga ah. Marka laga soo tago dhibcaha macaamiisha, Retina waxay isku dari kartaa oo kala qaybin kartaa xogta iyada oo loo marayo madal xogta macaamiisha si looga warbixiyo nidaamyada.
Horumarinta Miisaaniyadda Ololaha - Suuqgeeyayaasha istiraatijiyadeed waxay had iyo jeer raadiyaan habab ay ku wanaajiyaan kharashkooda xayeysiiska. Arrintu waxay tahay in badi suuqleydu ay sugaan ilaa 90 maalmood ka hor inta aysan cabbirin waxqabadkii ololihii hore oo ay u hagaajiyaan miisaaniyadaha mustaqbalka si waafaqsan. Retina Early CLV waxay awood siisaa suuqeeyayaasha inay sameeyaan doorashooyin caqli gal ah oo ku saabsan halka ay diirada saarayaan xayeysiiskooda inay ku bixiyaan wakhtiga dhabta ah, iyagoo u kaydinaya CPA-yadooda ugu sareeya macaamiisha iyo rajooyinka qiimaha sare leh. Tani waxay si dhakhso ah u wanaajisaa bartilmaameedyada CPA-yada ee ololayaasha qiimaha sarreeya si ay u soo saaraan ROAS sare iyo heerarka beddelka sare.
Maqalka Muuqaalka – Retina waxaan ogaanay in shirkado badan ay leeyihiin ROAS aad u hooseeya-badanaa ku dhawaad ​​1 ama xitaa in ka yar 1. Tani waxay badanaa dhacdaa marka qarashka xayeysiiska ee shirkadu aanu u dhigmin rajada ama qiimaha nolosha macaamiisha jira. Hal dariiqo oo si wayn loogu kordhiyo ROAS waa in la abuuro dhegaystayaal u eg qiimaha ku salaysan oo la dejiyo koofiyado u dhigma. Sidan, ganacsiyadu waxay u wanaajin karaan kharashaadka xayeysiiska iyada oo ku saleysan qiimaha macaamiishooda ay u keeni doonaan mustaqbalka fog. Meheraduhu waxay saddex jibaari karaan soo laabashadooda xayaysiiska ay ku kharash gareeyaan macaamiisha Retina inta ay nool yihiin daawadayaasha u eeg qiimaha ku salaysan.
Qandaraaska Qiimaha Ku Salaysan - Qandaraaska qiimaha ku salaysan ayaa lagu saadalinayaa fikradda ah in xitaa macaamiisha qiimaha yar ay mudan yihiin inay helaan Malahaas, Retina waxay ka caawisaa macaamiisha inay hirgeliyaan dalabka qiimaha ku salaysan (VBB) ololahooda Google iyo Facebook. Dejinta koofiyadaha qandaraasyadu waxay gacan ka geysan kartaa hubinta LTV sare: saamiga CAC waxayna siinaysaa macaamiisha dabacsanaan dheeraad ah si ay wax uga beddelaan cabbirrada ololaha si ay ugu habboonaadaan yoolalka ganacsiga. Xirmooyinka firfircoonida leh ee Retina, macaamiishu waxay si weyn u wanaajiyeen saamigooda LTV: CAC iyaga oo kharashaadka iibsiga ka ilaalinaya in ka hooseeya 60% xarafkooda tartanka.
Dhaqaalaha & Caafimaadka Macmiilka - Ka warbixi caafimaadka iyo qiimaha saldhigga macaamiishaada. Tayada Warbixinta Macaamiisha (QoC) waxay bixisaa falanqayn faahfaahsan oo ku saabsan saldhigga macaamiisha ee shirkadda. QoC waxay diiradda saartaa jaangooyooyinka mustaqbalka ee macaamiisha iyo xisaabaadka sinaanta macmiilka ee lagu dhisay dhaqanka iibka ee soo noqnoqda.
Jadwal u samee wac si aad wax badan uga barato
Tags: imtixaanka abaisirdoonka macmalcachagaajinta miisaaniyadda ololahaclv dhibcaha hogaankacaafimaadka macaamiishaqiimaha nolosha macaamiishaMaareeyaha xayaysiiska Facebookdhibcaha hogaankaMadison cawsduursaadaalin clvretina aiqandaraas ku salaysan qiimaha
Emad waa maamulaha guud iyo aasaasaha Retina AI. Tan iyo 2017 Retina waxay la shaqeysay macaamiisha sida Nestle, Dollar Shave Club, Madison Reed, iyo in ka badan. Kahor inta uusan ku biirin Retina, Emad waxa uu dhisay oo ku maamulay kooxaha falanqaynta Facebook iyo PayPal. Jacaylkiisa joogtada ah iyo waayo-aragnimadiisa gudaha warshadaha tignoolajiyada ayaa u suurtageliyay inuu dhiso alaabada ka caawisa ururrada samaynta go'aannada ganacsi ee wanaagsan iyagoo ka faa'iideysanaya xogtooda. Emad waxa uu BS ka qaatay Injineerinka Korontada ee Gobolka Penn, Masters of Electrical Engineering oo uu ka qaatay Machadka Rensselaer Polytechnic Institute, iyo MBA oo uu ka qaatay UCLA Anderson School of Management. Ka baxsan shaqadiisa Retina AI, waa blogger, ku hadla, lataliye bilawga, iyo adventurist dibadda.
5 Talooyin si aad u kordhiso Qiimaha beddelka Xayeysiiska Fiidiyowgaaga